Shiinaha Paper Straw Foorsada Eco-saaxiibtinimo Midabka Dabiiciga ah Samee Qurxinta Qurxinta Qurxinta iyo alaab-qeybiyeyaasha Changlin
Waxyaabaha: Caws xaashi ah Miisaanka: 41g
Cabir: L51 * W9.5 * H10cm Xiritaanka: Jiinyeer
Goobta Asalka: GUA, CN Dekedda: Shenzhen
Faa'iidada: dabiiciga ah ， dib loo cusboonaysiin karo
Wixii warqad tolmo leh, waxaan leenahay labo shey oo xaashi ah oo xaashi waraaq ah iyo raffia. Labadan shay waxaa badanaa loo isticmaalaa warshado badan.
From muuqaalka, cawska raffia iyo warqada cawsku waxay umuuqataa inaysan ka duwanaanaynin, laakiin waxay ahayd uun aragtida, cawska raffia ee gacanta lagu hayaa aad ayuu u siman yahay, mararka qaar wuxuu u eg yahay dareenka nooc caag ah, iyo cawska waraaqaha waxaa ku yaal hal taabasho adag, warqadda cawsku waa shay aad u guud oo qiimo jaban ku kaca, halka cawska raffia ay ka adag tahay cawska warqadda, kama cabsanayso biyaha, wuu ka xoog badan yahay.
Markay xaashida xaashi ama wax soosaarka raffia ay ka dhamaadaan nolosha, waxaa lagu kala saari karaa nidaamka qashinka lagu tuurayo ka dibna dib loogu celinayaa mashiinka qashirka si loo jajabiyo loona beddelo waraaqo kale oo waraaqo ah.
Guddi dhinac ah
Qaabku sidaa uma weyna oo way fududahay in la qaado oo la kaydiyo, marka laga reebo, waa qurux badan tahay waana u gaar unisex in la isticmaalo.
Bunku waa wax la mid ah tan jirka. Bacda oo dhami waa dabiici waxayna buuxisaa aquirements-ka “bey’ada u roon.” Dahaarka jaakadku waa suuf khafiif ah oo dib loo warshadeeyo isla markaana ka ilaaliyo alaabta ku jirta.
Xiga: Boorsada isku-qurxinta Eco-saaxiibtinimada leh ee Isku-xidhka Boorsada leh Tassel Puller
Warqadda Dabiiciga ah ee Straw Bag Eco-friendly Qurxinta O ...
Eco-saaxiibtinimo Qurxinta Bag Qabanqaabiyaha jiinyeer Pouc ...